Indlu ekwanti entliziyweni yentlango yeLika - I-Airbnb
Indlu ekwanti entliziyweni yentlango yeLika
Perušić, Lika-Senj County, Croatia
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMatej
Le yindlu encinci yeentaba entliziyweni yeLika, kufuphi nedolophu yasePerušić. Ijikelezwe kuphela ngendalo entle kunye nokuzola. Indlu inayo yonke into efunekayo ukuze ubalekele ukungxama kunye nabantu. Indlu ikwafumaneka ngaphantsi kwe-40km (45min) ukusuka ePlitvice National Park kunye nama-70km (1h30min) ukusuka kuMntla Velebit weSizwe. Ukuba ukhetha ulwandle, ungaya kulwandle lweAdriatic ukuya eKarlobag okanye eZadar ngeyure enye yokuqhuba ukusuka apha. Kwakhona kufuphi nomlambo i-Lika kunye nemiwonyo yawo kunye namanzi acocekileyo aku-20min kude.
Le ndlu inegumbi elinye kumgangatho ophantsi kunye nebhedi yesofa kunye neloft enebhedi ezintathu. Iindwendwe zinalo ikhitshi elinazo zonke izinto eziyimfuneko. Kukho negumbi lokuhlambela elinomatshini wokuhlamba. Indlu inethafa elikhulu elinetafile enkulu eyenziwe ngamaplanga ukuze ukwazi ukutya ngokwendalo. Kukwakho nezitulo zedekhi ukuba ufuna ukuphumla.
isofa ekwayibhedi eyi-1, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-3
Indlu ijikelezwe yindalo kunye namadlelo angapheliyo kunye neenkuni ukuze ukonwabele ukuhamba kunye nabantwana bakho kunye nezilwanyana zakho zasekhaya. Akukho nyani itrafikhi kwaye akukho bantu kufutshane nawe ukuze uyonwabele ngokupheleleyo kule ndawo yoxolo.
Umbuki zindwendwe ngu- Matej